टिप्पणी बुधबार, भदौ २०, २०७५
दुई खालका नागरिक उत्पादन हुने अहिलेको विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी समान सपना देख्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका काला जातिलाई गोराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले राम्रो दृष्टिले हेर्दैनथ्यो । काला जातिलाई सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ आदिमा पनि विभेद गरिन्थ्यो । उनीहरूले सेवा त पाउँथे, तर अलग्गै तरिकाले व्यवहार गरिन्थ्यो ।
अर्थात् ‘सेपरेट बट इक्वल’ (अलग तर समान) सिद्धान्तको चेपुवामा उनीहरू विभेद खेपिरहेका थिए । सोचौं, देश एउटै हो भने सबैका लागि एउटै कानून हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समान व्यवहार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
अमेरिकी संवैधानिक इतिहासमा यो फैसलाले निकै महत्व राख्छ । फैसलाले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्ना नागरिकहरूप्रति समान व्यवहार गर भनेर निर्देश गर्‍यो ।
निजीकरणको लहरले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि छोयो । शिशु कक्षादेखि कलेज र विश्वविद्यालयसम्ममा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थाले । शिक्षालाई सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारीकरणको दृष्टिले हेरिन थालियो ।
अभिभावकहरूले आम्दानीको अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सस्तोदेखि अति महँगा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन थाले । निजी विद्यालय खोल्ने लहर शहरदेखि ग्रामीण भेकसम्म फैलियो ।
आज नेपालमा एकातिर सरकारी विद्यालय र अर्कातिर निजी विद्यालयको शिक्षाले दुई खालका नागरिक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो दुईथरी शिक्षालाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । धनी र गरीबका लागि अलग सुविधा प्राप्त हुने विद्यालय खोल्ने विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी एउटै पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ ।
ताकि शिक्षाकै माध्यमबाट दुई खालका नागरिक उत्पादन भएर सामाजिक खाडल नगहिरियोस् । एउटै शिक्षा पाएर धनी र गरीबका छोराछोरीले समान सपना देख्ने वातावरण पाऊन् । शिक्षाको एउटै भँगालोमा पौडिएर उनीहरूले आफूलाई समान प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरून् ।